မဟာဗျူဟာ Binary Options ကို Hedging | ရိုးရှင်းသော Binary Options ကိုထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ - က ISO
Binary Options ကို၏ dynamic ကမ်ဘာပျေါတှငျမဟာဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကြီးအအမြတ်အစွန်းသေချာသို့မဟုတ်ဆိုးဝါးဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲဖို့တရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါမှထွက်ရှိမဟာဗျူဟာ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပြုလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာကိစ္စဖြစ်လာသည်။
ဤအလေ့လာသူ-oriented မဟာဗျူဟာ၏ A ကောင်းဆုံးသာဓကမဟာဗျူဟာ Hedging အဆိုပါ Binary Options ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒွိရွေးချယ်စရာအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးမြား၏တဦးတည်းဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အပေါ်မှီခိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအကွာအဝေးနှင့်တသားတ; အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များမှအတွေ့အကြုံကနေကွဲပြားတဲ့သူအသုံးပြုသူများသည်။
မဟာဗျူဟာ Hedging အဆိုပါ Binary Options ကိုအတိအကျကဘာလဲ?
တစ်ဦး binary options များ-အခြေအနေတွင်ထဲမှာထည့်သွင်းမီ, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးခြံသူ့ဟာသူအဓိပ်ပာယျသို့ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့စကား hedging နည်းလမ်းများအန္တရာယ်များ, လျော့ပါးစေရန်ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်။ တစ်ဦးကအစစ်အမှန်ဘဝခြံရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်သူခိုးဆန့်ကျင်နေတဲ့ခြံအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏အမျိုးအဘို့အာမခံဝယ်ယူဥပမာ, ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအလားတူအယူအဆလည်း, options ကုန်သွယ်ဈေးကွက်ထဲမှာသက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Binary Options ကိုမဟာဗျူဟာ Hedging နှင့်အတူ, သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာ, တူညီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးထားနှင့်ခေါ်ဆိုခ options များ execute မှဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာအများအားဖြင့်, မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုပတျဝနျးကငျြမှအထိခိုက်မခံနဲ့အလွယ်တကူပူးတွဲဖြစ်ရပ်များကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။
စိတ်ကူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးဆုံးရှုံးတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပြိုင်နက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကုန်ဆုံးမည့်အပျေါမှာရှိအရောင်းအများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းပါလိမ့်မယ်, သင်တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်းဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်အလယ်အလတ်အမြတ်သို့မဟုတျ, အဆိုးဆုံးအမှုမြင်ကွင်းထဲမှာအာမခံနေကြသည်။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်, ထို binary ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, Binary Options ကိုမဟာဗျူဟာ Hedging ဒေဝါလီဆန့်ကျင်သင့်အာမခံသည်။
ဒီအထူးသဖြင့်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းတွေအရေအတွက်နီးပါးန့်အသတ်ဖြစ်ပါသည်: ကုန်စည်ထံမှငွေကြေးရန်, စျေးကွက်အပေါ်တော်တော်များများအရာအားလုံး hedged နိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့, အများဆုံးကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်-to-နေ့ကအခြေခံပေါ်မှာ hedging မှဘာသာရပ်များအဖြစ်ငွေကြေး။ ထိုကဲ့သို့သော EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ငွေကြေးအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောခြံဇာတ်လမ်းအဘို့မြေပြင်ရေးသားထားပါတယ်ရာတွေအများကြီးအတက်အကျ။
သငျသညျမှာမဟာဗျူဟာ Hedging အဆိုပါ Binary Options ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှေးခယျြဘယ်ဟာကို, တဦးတည်းအရာအရေးပါဖြစ်နေဆဲ: စျေးကွက်လေ့လာရေးသင်သည်မရှိဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်မနိုင်ရာဖြစ်၏။ သတင်း Follow, စိတျထဲတှငျသငျသညျအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသောပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုထိခိုက်ခြင်း, ဇယားဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ, ထိုစာရင်းဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမြဲအမြဲသာအသိပေးထားသောဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်သမျှသောအမှုအရာဆက်ကြိုးစားပါ!
တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းအန္တရာယ်နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းသေချာတစ်ခုချင်းစီကိုကုန်သည်များအတွက်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်ရှိပါသည်။ က binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှကြွလာသောအခါရိုးရှင်းပြီးနားဖို့ကပိုရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲဖို့အသုံးပြုရလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းသူမြားထံမှအထိစေ့စေ့စပ်စပ်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောဤနည်းစနစ်, တစ်ဦးအသက်ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
သို့တိုင်, မဟုတ်အရာအားလုံး Rainbow နှင့်လိပ်ပြာများဖြစ်ပါတယ်။ ဤအနည်းဗျူဟာများနှင့် ပတ်သက်. အကွံဉာဏျ၏အရေးအပါဆုံးအပိုငျးကသူတို့ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်သင်၌ယုံကြည်မှုများမှာသာသူမြားကိုသုံးပြီးသတိနဲ့သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါ! ကိုသတိရပါ, အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာအမြဲသငျသညျမှာ excel တပါ!
Tags: အကောင်းဆုံး binary options များနည်းဗျူဟာ, အကောင်းဆုံး binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, မဟာဗျူဟာ hedging binary options များ, ထို binary options များဗျူဟာ, အလုပ်လုပ် binary options များနည်းဗျူဟာ, binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာခြံ, hedging မဟာဗျူဟာ binary options များ, binary options များအဘို့စောင်ရန်းကိုမဟာဗျူဟာ, ရိုးရှင်း binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ